Ihowuliseyili banxibe lining ipleyiti yoMvelisi kunye noMthengisi | Shengde
Ukunxiba ipleyiti enganyangekiyo ekubhekiseleni kuyo kubhekisa kwiipleyiti zokunxiba ezinganyangekiyo eziqhubekekayo ukusuka kwipleyiti yentsimbi yokunxiba engagungqiyo ngeenkqubo zemveliso ezinje ngokusika, ukuqengqeleka kwepleyiti, ukubhola kunye nokudibanisa, njengokuhambisa ipleyiti yokuhambisa, ipleyiti yamalahle ezantsi / inkanyamba eguqulweyo kunye nelining ipleyiti, ibreyidi enxibayo, njl.njl.
Nxiba ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo ngumaleko wokunxiba onganyangekiyo ubukhulu becala obunjwe yiCr7C3 carbides eneqhezu lomthamo ongaphezulu kwe-50% elenziwe ngokuvela kwisitya sensimbi esiqhelekileyo, ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo ngobushushu kunye nembasa yesinyithi.
Ukunxiba ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo kunxiba kakhulu, ukumelana nefuthe, ukukhubazeka kunye nokuqina. Inokuqwalaselwa ngokuthe ngqo kumacandelo obunjineli njengeplate yensimbi, enje ngokushenxisa crimping, ukusika kunye nokubhola, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zemizi-mveliso enganyangekiyo kunye nemigodi.
Ukuxinana ≥ 3.6 g / cm3
Ubulukhuni beRockwell ≥ 85 HRC
Isidanga soxinzelelo ≥ 850 MPa
Ukomelela koqhekeko K, C ≥4.8MPa · m1 / 2
Ukugoba amandla ≥ 290mpa
Ukuqhutywa kwe-Thermal 20W / mk
Umlingani wolwandiso lwe-thermal: 7.2 × 10-6m / mK
Xa kuthelekiswa nezinto ezininzi zokunxiba ezinganyangekiyo, ipleyiti yesinyithi edityanisiweyo enxibe into enokubekwa endaweni yayo:
1. Ukwenziwa kweekhemikhali koluhlu oluphezulu lokunxiba olunganyangekiyo lunomxholo wekhabhoni we-4 ~ 5% kunye nomxholo we-chromium wama-25 ~ 30%. Iqhezu levolumu ye-Cr7C3 carbide kulwakhiwo lwe-metallographic ingaphezulu kwe-50%, ubunzima be-macro yi-hrc56 ~ 62, kwaye ubunzima be-chromium carbide yi-hv1400 ~ 1800, ephezulu kune-quartz esantini HV800 ~ 1200. Ngenxa yokuba I-carbides isasazwe ngokuthe nkqo kwicala lokunxiba, ukuxhathisa ukunxiba kuphindwe kabini xa kuthelekiswa ne-alloy cast kunye nokwakheka okufanayo kunye nobulukhuni.
2. Xa kuthelekiswa nezinto ezininzi eziqhelekileyo, ukuxhathisa ukunxiba kulandelayo:
(1) Kwaye intsimbi ethambileyo; 20 ~ 25:
(2) Kwaye intsimbi ephezulu yemanganese; 5 ~ 10:
(3) Nesinyithi sesixhobo; 5 ~ 10:
(4) Kwaye njengokuba i-chromium ephezulu yenze isinyithi; 1.5 ~ 2.5:
2. Ukuchasana nefuthe elilungileyo: umaleko osezantsi wepleyiti yentsimbi yokunxiba enganyangekiyo iphantsi yentsimbi yekhabhoni okanye ingxubevange ephantsi. Isinyithi kunye nezinye izinto ze-ductile zibonisa izibonelelo zebimetali. Umaleko wokunxiba onganyangekiyo unqanda ukunxiba kwimithombo yeendaba, kwaye i-substrate ithwala umthwalo weendaba, ke oko kunempembelelo elungileyo. Iyakwazi ukumelana nefuthe kunye nokunxiba kwe-hopper ephezulu kwinkqubo yokuhambisa izinto.
3.Ukuchasana nobushushu obuhle: kucetyiswa ukuba kusetyenziswe umaleko onxibayo ukuba usetyenziswe phantsi kwemeko zokusebenza ≤ 600 ℃. Ukuba i-vanadium, i-molybdenum kunye nezinye i-alloys zongezwa kulungelelwaniso lwe-alloy, inokumelana nobushushu obuphezulu obuyi-800 ℃. Iqondo lobushushu lokusebenza elicetyiswayo yile ilandelayo: I-substrate yentsimbi yekhabhoni icetyiswa ukuba isetyenziswe phantsi kwemeko yokusebenza engekho ngaphezulu kwe-380 ℃; Iplate yensimbi ephantsi yobushushu enganyangekiyo (15CrMo, 12Cr1MoV, njl. I-substrate yentsimbi engenakunqanda ubushushu iyacetyiswa ukuba isetyenziswe phantsi kwemeko yokusebenza engekho ngaphezulu kwe-800 ℃.
4. Umaleko ingxubevange banxibe-enganyangekiyo ipleyiti intsimbi edityanisiweyo kunye nokumelana elungileyo iqulathe ipesenti ephezulu chromium yesinyithi, ngoko ke inento ethile yokuthintela umhlwa kunye nokumelana. Isetyenziswa kwi-chute yamalahle nakwifanele ukuthintela ukunamathela kwamalahle.
5.Ukusebenza okunamandla, ipleyiti yentsimbi edityanisiweyo enokunxiba inoluhlu olubanzi lokubalula kunye neendidi, kwaye ibe luthotho lweemveliso. Ubunzima be-alloy-resistant alloy layer 3 ~ 20mm. Ubunzima obuncinci beplate yensimbi edibeneyo yi-6mm, kwaye ubukhulu bayo abunamkhawulo. Ipleyiti yesinyithi edityanisiweyo engagungqiyo inokubonelela nge-1200 okanye i-1450 × 2000mm, okanye yenziwe ngokwezifiso ngokobungakanani bomzobo ngokweemfuno zomsebenzisi. Gqoka ipleyiti yentsimbi enganyangekiyo ngoku yahlulwe yohlobo oluqhelekileyo, uhlobo olunganyangekiyo nefuthe lobushushu. Kufuneka icaciswe xa u-odola ubushushu obuphezulu obunxibayo kunye nefuthe leplate yentsimbi enganyangekiyo.
6.Ukusebenziseka ngokukuko kokusebenza kokumelana neplate yentsimbi kunokunqunyulwa, ukulinganiswa, ukugqobhoza, ukugoba kunye nokugoba. Inokwenziwa ipleyiti ethe tyaba, ipleyiti ye-arc, ipleyiti yekona kunye nesilinda. Ipleyiti yokusika edityanisiweyo inokudityaniswa kwiindidi ezahlukeneyo zobunjineli okanye iinxalenye. Isitya esidityanisiweyo sinokufudunyezwa kwaye sicinezelwe kwimo enobunzima bokubumba. Ipleyiti yesinyithi edityanisiweyo enganyangekiyo inokulungiswa kwizixhobo ngeebholithi okanye nge-welding, ekulungele ukutshintshwa kunye nokugcinwa.
7. Nangona iindleko zokuvelisa zonyukile, ubomi benkonzo bonyuswe amatyeli aliqela, nto leyo inciphisa kakhulu iindleko zokugcina kunye nelahleko yokuvala. Ukusebenza kwexabiso malunga namaxesha ama-2 ~ 4 aphezulu kunaleyo yezinto eziqhelekileyo. Ubukhulu bokuphatha izinto ezibonakalayo kunye nokubaluleka kokunxiba kwezixhobo, kokukhona kubonakala ngakumbi kuqoqosho lokusebenzisa ipleyiti yentsimbi edityanisiweyo.
Ukuzimisela koxinzelelo lokunxiba
Xa ukugaya izinto kuphakathi (i-slag Bond index ye-20, i-index ye-Bond yokusebenza ye-10, i-Hastelloy index ye-75 okanye i-ton ye-3G / T), ixesha eliqhelekileyo lokusebenza kweendawo ezinxibayo ze-slag nkqo emva kokugquma ukufikelela kwiiyure ezingama-1800 ~ 2000, ixesha lokusebenza kweendawo ezinxibayo ezingagungqiyo zokugaya amalahle zingafikelela ngaphezulu kweeyure ezingama-7000, kwaye ixesha lokusebenza kwamalungu anokumelana nokutya okuguqulwayo okuthe nkqo okusila kungafikelela ngaphezulu kweeyure ezingama-7000 Xa ixesha lokusebenza iindawo ezinxibayo ezinganyangekiyo zesamente ezime nkqo zifikelela ngaphezulu kweeyure ezingama-2500 kwaye ixesha lokusebenza kwe-extrusion roller lifikelela ngaphezulu kweeyure ezingama-4000 (emva kokuvela kwi-intanethi) ~ iiyure ezingama-8000 (emva kokugqabhuka ngaphandle kweintanethi), kunokuqwalaselwa ukuba iinxalenye ezinxibayo emva kokudibana nokuhlangabezana neemfuno zokusebenza ezilindelekileyo zokunxiba.
Kwindawo yokugaya ethe nkqo yokugaya kunye nezinto ezisisiseko ze-chromium cast iron okanye i-nickel hard Ⅳ, umaleko wokugqabhuka awuyi kuwa zingaphelanga iinyanga ezintathu emva kokuphinda kwenziwe kwakhona kwaye kusebenze.
Egqithileyo Izixhobo zokunxiba eziphezulu ezinganyangekiyo zentsimbi ezinikezelwa ngokuthe ngqo ngabavelisi
Okulandelayo: Umhlathi isityumzi izinyo ipleyiti